Ibhanki ye-BNZ ngoku ixhasa iApple Pay eNew Zealand | Ndisuka mac
Ibhanki ye-BNZ ngoku ixhasa iApple Pay eNew Zealand
Kwiinyanga ezidlulileyo khange sibenazo iindaba ezinxulumene nokwanda kwe-Apple Pay yamazwe aphesheya, kodwa kwezi veki zidlulileyo iindaba ezinxulumene nale teknoloji yentlawulo ye-elektroniki bezilulungelelwano losuku. Ngapha koko, izolo obu buchwephesha bufikelele kumazwe amane amatsha: I-United Arab Emirates, iFinland, iDenmark neSweden.
Ezinye iindaba ezinxulumene neApple Pay zinxulumene nenani leebhanki okwangoku ezibonelela ngetekhnoloji yokuhlawula. INew Zealand, Ibhanki entsha eyongezwe kwinani leebhanki ezihambelana neApple Pay Yi-BNZ, eyona bhanki yesibini inkulu elizweni, ke u-Apple ngumdlali obaluleke kakhulu malunga noku.
Okwangoku, abathengi bebhanki kuya kufuneka balinde de kube sekupheleni kwale nyanga ukuqala ukongeza ikhadi labo le-BNZ VISA khadi, eya kuthi ivumele bonke abathengi bebhanki nge-iPhone 6 okanye ngaphezulu, i-Apple Watch okanye i-iPad Air 2 ukusukela ngoku ukubhatala konke okuthengileyo ngaphandle kwesidingo sokusebenzisa ikhadi ngokwasemzimbeni. Ngokuka-David Bullock, uMlawuli weeMveliso kunye neTekhnoloji kwi-BNZ Bank:
Siyazi ukuba abathengi bethu bafuna amava awodwa avumela ukuba bahlawule ngokukhawuleza, ngokulula nangokukhuselekileyo kuluhlu olubanzi lwezixhobo apha, kwi-Intanethi nakwamanye amazwe. Besisoloko sisiva ukuba abathengi bethu bayicela njani iApple Pay kwaye kuyonwabisa kakhulu ukwazi ukuba ilapha
Kude kube ngoku, inkqubo yentlawulo yokunxibelelana ebizwa ngokuba yi-Eftpos yayiyeyona isetyenziswa kakhulu kwilizwe liphela. Iirhafu zekhomishini ezihlawuliswe kwintengiselwano nganye ziphantsi kakhulu, yiyo loo nto ube sesinye sezixhobo ezithandwa kakhulu elizweniKodwa ngokufika kweApple Pay, ukusetyenziswa kwayo kunokuba kunokwenzeka ukuba kwehle kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ibhanki ye-BNZ ngoku ixhasa iApple Pay eNew Zealand
Ukuqhekeka kweMacOS kukhulu kunokuba ucinga
Njani kwaye phi ukukhuphela iinguqulelo ezindala zeMacOS